Wararka Maanta: Axad, Apr 8 , 2012-Al-shabaab oo ku hanjabtay inay dib u qabsanayso Degmooyinkii laga qabsaday ee ku yaalla Koonfurta iyo Bartamaha Somalia
Al-shabaab oo ku hanjabtay inay dib u qabsanayso Degmooyinkii laga qabsaday ee ku yaalla Koonfurta iyo Bartamaha Somalia Axad, Abriil 08, 2012 (HOL) — Xarakada Al-shabaab ayaa sheegtay inay waddo qorshey ay ku doonayso inay dib ugu qabsato degmooyin ku yaalla gobollada bartamaha iyo Koonfurta Soomalaiya oo ay qabsadeen ciidamada DKMG ah iyo kuwa Itoobiya oo iskaashanaya.
Afhayeenka Al-shabaab, Sheekh Cali Maxmauud Raage (Sheekh Cali Dheere) oo dad badan kula hadlayay Sabtidii shalay degmada Baardheere ee gobolka Gedo ayaa sheegay inay wadaan qorshe ay ku doonayaan inay dib ugu qabsadaan dhammaan degmooyinkii laga qabsaday.
"Waxaan u sheegaynaa Soomaalida oo dhan inaysan niyadjabin ku noqon maqalka degmooyinka la qabsaday sida Baydhabo iyo Xudur, waxaan wadnaa qorshe aan dib ugu saarayno cadowga soo duulay," ayuu Sheekh Cali Dheere u sheegay dadkii uu la hadlayay.
Afhayeenka Al-shabaab, wuxuu ciidamada Itoobiya iyo kuwa Kenya ku eedeeyay inay kusoo xadgudbeen dalka Soomaaliya, isagoo inay ciidamada dowladda KMG ah gacan ku siinayaan sidii lagu burburin lahaa walaayaadka islaamiga ah ee dalka ka jira.
Ciidamada Kenya iyo kuwa Itoobiya oo caawinaya ciidamada DKMG ah ayaa waxay tan iyo bishii Oktoobar ee sannadkii hore ka qabsadeen xoogagga Al-shabaab degmooyin ku yaalla baratmaha iyo Koonfurta Soomaaliya, kuwaasoo qaarkood la qabsaday dagaal la'aan.
Xarakada Al-shabaab oo ka talinaysay muddo saddex sano ka badan inta badan gobollada bartamaha iyo Koonfurta Soomaaliya ayaa waxaa saaran culeys milateri oo kaga imaanaya dalalka dariska ah iyo ciidamada AMISOM.
Axad, April 08, 2012(HOL): Waxaa shalay oo Sabti ahayd 07/04 kulan aan caadi aheyn ku yeeshay guddiga fulinta GOS iyo madaxda xiriirada magaalada Muqdishu. Madaxweynaha Somaliland oo guddi wasiirro ah u magacaabay wadahadallo dhexmara Dowladda KMG ah iyo Somaliland 4/8/2012 2:56 AM EST